စမတ်ဖုန်းဝယ်ယူတဲ့အခါ သတိပြုသင့်တဲ့ အချက် ၆ချက်
စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမဝယ်ခင် ကြိုသိထားသင့်တဲ့ အချက် ၆ချက်
9 Apr 2018 . 4:50 PM
စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ယူတဲ့အခါမှာ ကိုယ်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးနဲ့ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဝယ်ယူကြပါတယ်။ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ User တွေကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် Online က Review တွေဖတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် Specification တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ဘယ်လိုပဲပြည့်စုံအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား ပြင်ဆင်ထား ရွေးစရာတွေများလာတဲ့အခါမှာတော့ ဇဝေဇဝါတွေဖြစ်ပြီး ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်လာမယ့် ဖုန်းနဲ့ လွဲခဲ့ကြပါတော့တယ်။ (ဝယ်ပြီးမှ ငါ ဘယ်ဖုန်းလေးဝယ်လိုက်ရင်ကောင်းသားဆိုပြီး နောင်တတွေရရင်းပေါ့)
အခုဖော်ပြမယ့်အချက်တွေကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေကို စစ်တမ်းကောက်ယူထားတာဖြစ်ပြီး မကြာခဏဆိုသလို ဦးတည်ချက်ကနေလွဲမှားသွားတတ်တဲ့ သတိထားရမယ့်အချက်တွေကိုအကြောင်းကို စုစည်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) TV ကြော်ငြာတွေကိုမယုံပါနဲ့
TV ကြော်ငြာလို့ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပေမယ့် လက်ရှိမှာ Online Media တွေမှာပါအများဆုံးပါဝင်နေပါတယ်။ TV နဲ့ Media တွေမှာ ကြိုကြားကြိုကြားနဲ့ ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ စမတ်ဖုန်းကြော်ငြာတွေကို မယုံပါနဲ့။ ဘယ်အပိုင်းကို ဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်ထားတာ ကင်မရာဘယ်လိုကြီးတောင်ကောင်းတာ၊ iPhone နဲ့ ဘယ်လိုတောင်တူတာ ၊ ပုံမှန်ဈေးနှုန်းဆို ဈေးအရမ်းများတယ် ဘယ်လိုမှ မဝယ်နိုင်ဘူး Blah Blah Blah… အဲ့တာတွေကိုယုံပြီးဝယ်မိရင် ကိုယ့်ဘာကိုယ် ဂျင်းပြန်ထည့်တယ်လို့သာ မှတ်ရပါမယ်။ (ကြော်ငြာထဲမှာတော့ လှပသစ်လွင်တဲ့ ဖုန်းလေးဟာ လေထဲကနေလွင့်လာပြီး အရောင်စုံတောက်ပနေတဲ့မီးရောင်အောက်မှာ ကနေတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီး Selfie တွေ လှိမ့်ရိုက်ပြနေပါလိမ့်မယ်.. ဘယ်လောက်ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တဲ့ မြင်ကွင်းလေးလဲ ?) စမတ်ဖုန်းကြော်ငြာသူတွေရဲ့ Video ကြော်ငြာထဲမှာ အများဆုံးတွေ့ရမှာက ၄င်းတို့ရဲ့ ကင်မရာတွေဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်းကို ပြောနေပါလိမ့်မယ်။
(၂) ဆိုင်ကပြောတာ တဝက်ပဲယုံပါ
သင်ဟာ ဖုန်းဆိုင်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ဖြင့် အရောင်အသွေးစုံတဲ့ အရောင်းသမလေးတွေဟာ ပျားရည်ပေါ်သကာလောင်းတဲ့ အသံလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Brand ကဘယ်လိုအောင်မြင်တာ၊ လူကြိုက်ဘယ်လောက်များပြီး ဒီဖုန်းလေးကတော့ ဘယ်လို ဖန်ရှင်တွေစုံလင်တာ ဆိုတာ၊ Service ကဘယ်လိုကောင်းတာ၊ ဖုန်းကဘယ်လိုသွက်ပြီး Core ဘယ်နှလုံးပါတာ… အစရှိသဖြင့် မရပ်မနားရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။(သူတို့ဖုန်းရောင်းရတဲ့အခါ ကော်မရှင်တွေ ဘောနက်(စ)တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်) အားနာတတ်ရင်တော့ မြန်မြန်ပြန်လှည့်ထွက်ပြီး စိတ်ဝင်စားလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြောသမျှ တဝက်ပဲယုံပြီး ကိုယ့်အတွက်လိုအပ်တာနဲ့ တစ်ကယ်ရောလိုက်လျောညီထွေရှိရဲ့လားဆိုတာ ဘယ်သူမှမမေးပဲ ၅မိနစ်လောက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ဖုန်းဝယ်ဖို့ ဖုန်းဆိုင်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုရွေးပါသလဲ၊ နီးစပ်ရာဆိုင်ကိုဝင်ပြီး ကိုယ်နဲ့စကားပြောလို့အဆင်ပြေတဲ့ဆိုင်ကိုရွေးတာ 80% လောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။
Facebook Page တွေမှိုလိုပေါက်ပြီး Review တွေဒီလောက်ပေါနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ Online ပေါ်တက် Mobile Phone User Group တွေထဲဝင်ပြီး ဘယ်ဖုန်းဆိုင်မှာဝယ်ရတာ အဆင်ပြေလဲ စုံစမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။ အချိန်မကုန် ငွေမကုန်ပဲ အကောင်းဆုံးဆိုင်ကို မကြာခင်တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဝယ်မယ့်ဖုန်းဆိုင်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ Service ဝန်ဆောင်မှုအနေအထား နဲ့ ဈေးနှုန်း မှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုလေ့လာပြီး ချီတက်နိုင်ပါတယ်။( မှတ်ချက် ဘာဖုန်းဝယ်သင့်သလဲလို့မမေးဖို့အထူးဂရုပြုပါ)
(၄) ဈေးအကြီးဆုံး (သို့) ဈေးအပေါဆုံး ဖုန်းကိုဝယ်ဖို့တကယ်လိုလား
iPhone X ကဈေးအရမ်းကြီးတယ်၊ ဒါဆို အဲ့ဖုန်းက အကောင်းဆုံးလား…?
ဒါမှမဟုတ် ဈေးအရမ်းသက်သာတဲ့ဖုန်းကရော အမြဲတမ်း ဝယ်ခါစကလို အဆင်ပြေနေပါ့မလား ? ဒီနှစ်ချက်လုံးက သင့်ရဲ့ငွေတွေကို မလိုအပ်ပဲကုန်ဆုံးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘယ်ဖုန်းတွေဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ပြောပြော ကိုယ့်အတွက် အဓိကလိုအပ်မယ့် စွမ်းဆောင်ချက်ပါတဲ့ဖုန်းကိုပဲရွေးပါ။ ခပ်ပေါပေါ ဖုန်းတစ်လုံးကို ဝယ်လိုက်ပြန်ရင်လည်း အရေးအကြောင်းဆို စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါနိုင်ပဲ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ကျဆင်းစေပြန်ပါတယ်။
(၅) နှစ်ဆွေးဖုန်းတွေမဝယ်မိပါစေနဲ့၊ Brand မစွဲပါနဲ့
Samsung Galaxy S7 Edge ဟာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်ကပေါ့။ ခုချိန်မှာ S7 ယူမလားမေးရင် ယူပါဦးမလား? ဖုန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်၊ လက်ရှိ Operation System တွေ၊ Software Requirement တွေ၊Battery သက်တမ်းတွေ.. ဒါတွေကိုလိုက်လို့မှီမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဝယ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ခုချိန်မှာ အကောင်းဆုံးဖုန်းကိုဝယ်ပါ။ iPhone မှ Samsung မှ မဟုတ်ပဲ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းအရလည်း ထက်ဝက်လောက်သက်သာတဲ့ လူသိနည်းတဲ့ စမတ်ဖုန်း Brand တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ဈေးအများကြီးမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တောင် လက်ရှိ OS Version ကို တစ်ဆင့်ထက် ပိုမနိမ့်တဲ့ စမတ်ဖုန်းမျိုးပဲရွေးပါ။ ဥပမာ လက်ရှိ Android Verson 8.1 ဆိုရင် အနိမ့်ဆုံး Version ဟာ 7.1.2 ဒါမှမဟုတ် 8.0 လောက်တော့ရှိနေသင့်ပါတယ်။
(၆)ကိုယ့်အတွက် အဓိကလိုအပ်တဲ့အချက်ကို မမေ့ပါနဲ့
ဖုန်းဝယ်တဲ့အခါမှာ ဦးစားပေးရမယ့် အချက်ကို ၃ ချက်ခွဲပါ။
-စက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် (Performance)
-ကြာရှည်ခံမယ့် Battery(Battery Life)
– စိတ်ကျေနပ်စေမယ့် Camera ရုပ်ထွက် ( Selfie or Photography)
အထက်ဖော်ပြပါ အချက် ၃ချက်ထဲက ကိုယ့်အတွက် ပထမဦးစားပေးကို တစ်ခုရွေးပါ။ ကိုယ်ဦးစားပေးရွေးတဲ့ ပထမအချက်ပေါ်မူတည်ပြီးဈေးနှုန်းကတော့ ကွာခြားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့အချက်ကိုရဖို့အတွက် ထိုက်သင့်တဲ့တန်ဖိုးတော့ ပေးလိုက်ပါ။
အခုဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအတိုင်း စဉ်းစားပြီးဝယ်ရင်တော့ Akhayar-Tech ရဲ့ Fans တွေအတွက် အကောင်းဆုံးမဟုတ်ရင်တောင် အဆင်အပြေဆုံးသုံးလို့ရမယ့် စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးဝယ်ယူနိုင်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကဲ AT ရဲ့ Fans တွေရော ဖုန်းဝယ်ရင် ဘယ်လိုအချက်တွေက ဦးစားပေးရတဲ့အချက်တွေဖြစ်မယ်လို့ထင်သလဲ။ ဆွေးနွှေးခဲ့ပါဦး
စမတျဖုနျးတဈလုံးမဝယျခငျ ကွိုသိထားသငျ့တဲ့ အခကျြ ၆ခကျြ
စမတျဖုနျးတဈလုံးဝယျယူတဲ့အခါမှာ ကိုယျနဲ့အကိုကျညီဆုံးနဲ့ အဆငျပွဆေုံးဖွဈဖို့အတှကျ နညျးလမျးအမြိုးမြိုးနဲ့ဝယျယူကွပါတယျ။ နားလညျတတျကြှမျးတဲ့ User တှကေိုအကူအညီတောငျးပွီးတော့ပဲဖွဈဖွဈ Online က Review တှဖေတျပွီးတော့ပဲဖွဈဖွဈ Specification တှကေိုလလေ့ာပွီးတော့ပဲဖွဈဖွဈ စတဲ့နညျးလမျးတှပေါဝငျပါတယျ။ ဘယျလိုပဲပွညျ့စုံအောငျကွိုတငျပွငျဆငျထား ပွငျဆငျထား ရှေးစရာတှမြေားလာတဲ့အခါမှာတော့ ဇဝဇေဝါတှဖွေဈပွီး ကိုယျ့အတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈလာမယျ့ ဖုနျးနဲ့ လှဲခဲ့ကွပါတော့တယျ။ (ဝယျပွီးမှ ငါ ဘယျဖုနျးလေးဝယျလိုကျရငျကောငျးသားဆိုပွီး နောငျတတှရေရငျးပေါ့)
အခုဖျောပွမယျ့အခကျြတှကေတော့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာရှိတဲ့ စမတျဖုနျးအသုံးပွုသူတှကေို စဈတမျးကောကျယူထားတာဖွဈပွီး မကွာခဏဆိုသလို ဦးတညျခကျြကနလှေဲမှားသှားတတျတဲ့ သတိထားရမယျ့အခကျြတှကေိုအကွောငျးကို စုစညျးဖျောပွထားတာဖွဈပါတယျ။
(၁) TV ကွျောငွာတှကေိုမယုံပါနဲ့
TV ကွျောငွာလို့ခေါငျးစဉျတပျထားပမေယျ့ လကျရှိမှာ Online Media တှမှောပါအမြားဆုံးပါဝငျနပေါတယျ။ TV နဲ့ Media တှမှော ကွိုကွားကွိုကွားနဲ့ ပျေါပျေါလာတဲ့ စမတျဖုနျးကွျောငွာတှကေို မယုံပါနဲ့။ ဘယျအပိုငျးကို ဘယျလိုအဆငျ့မွှငျ့ထားတာ ကငျမရာဘယျလိုကွီးတောငျကောငျးတာ၊ iPhone နဲ့ ဘယျလိုတောငျတူတာ ၊ ပုံမှနျဈေးနှုနျးဆို ဈေးအရမျးမြားတယျ ဘယျလိုမှ မဝယျနိုငျဘူး Blah Blah Blah… အဲ့တာတှကေိုယုံပွီးဝယျမိရငျ ကိုယျ့ဘာကိုယျ ဂငျြးပွနျထညျ့တယျလို့သာ မှတျရပါမယျ။ (ကွျောငွာထဲမှာတော့ လှပသဈလှငျတဲ့ ဖုနျးလေးဟာ လထေဲကနလှေငျ့လာပွီး အရောငျစုံတောကျပနတေဲ့မီးရောငျအောကျမှာ ကနတေဲ့ ကောငျမလေးရဲ့လကျထဲကိုရောကျသှားပွီး Selfie တှေ လှိမျ့ရိုကျပွနပေါလိမျ့မယျ.. ဘယျလောကျကွညျနူးစရာကောငျးလိုကျတဲ့ မွငျကှငျးလေးလဲ ?) စမတျဖုနျးကွျောငွာသူတှရေဲ့ Video ကွျောငွာထဲမှာ အမြားဆုံးတှရေ့မှာက ၎င်းငျးတို့ရဲ့ ကငျမရာတှဘေယျလောကျကောငျးကွောငျးကို ပွောနပေါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ အဆိုပါကွျောငွာအတှကျရိုကျထားတဲ့ Video ကိုတော့ ကောငျးလှပါတယျဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဖုနျးကငျမရာနဲ့ရိုကျထားတာ စက်ကနျ့ပိုငျးတောငျပါဝငျမှာမဟုတျပါဘူး။
(၂) ဆိုငျကပွောတာ တဝကျပဲယုံပါ
သငျဟာ ဖုနျးဆိုငျထဲရောကျသှားပွီဆိုရငျဖွငျ့ အရောငျအသှေးစုံတဲ့ အရောငျးသမလေးတှဟော ပြားရညျပျေါသကာလောငျးတဲ့ အသံလေးတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့ Brand ကဘယျလိုအောငျမွငျတာ၊ လူကွိုကျဘယျလောကျမြားပွီး ဒီဖုနျးလေးကတော့ ဘယျလို ဖနျရှငျတှစေုံလငျတာ ဆိုတာ၊ Service ကဘယျလိုကောငျးတာ၊ ဖုနျးကဘယျလိုသှကျပွီး Core ဘယျနှလုံးပါတာ… အစရှိသဖွငျ့ မရပျမနားရှငျးပွပါလိမျ့မယျ။(သူတို့ဖုနျးရောငျးရတဲ့အခါ ကျောမရှငျတှေ ဘောနကျ(စ)တှရေရှိမှာဖွဈပါတယျ) အားနာတတျရငျတော့ မွနျမွနျပွနျလှညျ့ထှကျပွီး စိတျဝငျစားလို့ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ ပွောသမြှ တဝကျပဲယုံပွီး ကိုယျ့အတှကျလိုအပျတာနဲ့ တဈကယျရောလိုကျလြောညီထှရှေိရဲ့လားဆိုတာ ဘယျသူမှမမေးပဲ ၅မိနဈလောကျပွနျစဉျးစားကွညျ့ပါ။
ဖုနျးဝယျဖို့ ဖုနျးဆိုငျကိုရှေးခယျြတဲ့အခါမှာ ဘယျလိုရှေးပါသလဲ၊ နီးစပျရာဆိုငျကိုဝငျပွီး ကိုယျနဲ့စကားပွောလို့အဆငျပွတေဲ့ဆိုငျကိုရှေးတာ 80% လောကျရှိပါလိမျ့မယျ။
Facebook Page တှမှေိုလိုပေါကျပွီး Review တှဒေီလောကျပေါနတေဲ့ခတျေကွီးထဲမှာ Online ပျေါတကျ Mobile Phone User Group တှထေဲဝငျပွီး ဘယျဖုနျးဆိုငျမှာဝယျရတာ အဆငျပွလေဲ စုံစမျးကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ အခြိနျမကုနျ ငှမေကုနျပဲ အကောငျးဆုံးဆိုငျကို မကွာခငျတှမွေ့ငျရပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျဝယျမယျ့ဖုနျးဆိုငျကိုတှပွေီ့ဆိုရငျတော့ Service ဝနျဆောငျမှုအနအေထား နဲ့ ဈေးနှုနျး မှနျကနျမှုရှိမရှိကိုလလေ့ာပွီး ခြီတကျနိုငျပါတယျ။( မှတျခကျြ ဘာဖုနျးဝယျသငျ့သလဲလို့မမေးဖို့အထူးဂရုပွုပါ)
(၄) ဈေးအကွီးဆုံး (သို့) ဈေးအပေါဆုံး ဖုနျးကိုဝယျဖို့တကယျလိုလား
iPhone X ကဈေးအရမျးကွီးတယျ၊ ဒါဆို အဲ့ဖုနျးက အကောငျးဆုံးလား…?
ဒါမှမဟုတျ ဈေးအရမျးသကျသာတဲ့ဖုနျးကရော အမွဲတမျး ဝယျခါစကလို အဆငျပွနေပေါ့မလား ? ဒီနှဈခကျြလုံးက သငျ့ရဲ့ငှတှေကေို မလိုအပျပဲကုနျဆုံးစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ဘယျဖုနျးတှဘေယျလောကျကောငျးတယျပွောပွော ကိုယျ့အတှကျ အဓိကလိုအပျမယျ့ စှမျးဆောငျခကျြပါတဲ့ဖုနျးကိုပဲရှေးပါ။ ခပျပေါပေါ ဖုနျးတဈလုံးကို ဝယျလိုကျပွနျရငျလညျး အရေးအကွောငျးဆို စိတျသှားတိုငျးကိုယျမပါနိုငျပဲ စှမျးဆောငျရညျတှေ ကဆြငျးစပွေနျပါတယျ။
(၅) နှဈဆှေးဖုနျးတှမေဝယျမိပါစနေဲ့၊ Brand မစှဲပါနဲ့
Samsung Galaxy S7 Edge ဟာ အရမျးကောငျးပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၂နှဈလောကျကပေါ့။ ခုခြိနျမှာ S7 ယူမလားမေးရငျ ယူပါဦးမလား? ဖုနျးရဲ့စှမျးဆောငျရညျ၊ လကျရှိ Operation System တှေ၊ Software Requirement တှေ၊Battery သကျတမျးတှေ.. ဒါတှကေိုလိုကျလို့မှီမှာမဟုတျတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဝယျနိုငျမယျဆိုရငျ ခုခြိနျမှာ အကောငျးဆုံးဖုနျးကိုဝယျပါ။ iPhone မှ Samsung မှ မဟုတျပဲ စှမျးဆောငျရညျကောငျးမှနျပွီး ဈေးနှုနျးအရလညျး ထကျဝကျလောကျသကျသာတဲ့ လူသိနညျးတဲ့ စမတျဖုနျး Brand တှလေညျးရှိပါသေးတယျ။ ဈေးအမြားကွီးမသုံးခငျြဘူးဆိုရငျတောငျ လကျရှိ OS Version ကို တဈဆငျ့ထကျ ပိုမနိမျ့တဲ့ စမတျဖုနျးမြိုးပဲရှေးပါ။ ဥပမာ လကျရှိ Android Verson 8.1 ဆိုရငျ အနိမျ့ဆုံး Version ဟာ 7.1.2 ဒါမှမဟုတျ 8.0 လောကျတော့ရှိနသေငျ့ပါတယျ။
(၆)ကိုယျ့အတှကျ အဓိကလိုအပျတဲ့အခကျြကို မမပေ့ါနဲ့
ဖုနျးဝယျတဲ့အခါမှာ ဦးစားပေးရမယျ့ အခကျြကို ၃ ခကျြခှဲပါ။
-စကျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျ (Performance)
-ကွာရှညျခံမယျ့ Battery(Battery Life)
– စိတျကနြေပျစမေယျ့ Camera ရုပျထှကျ ( Selfie or Photography)
အထကျဖျောပွပါ အခကျြ ၃ခကျြထဲက ကိုယျ့အတှကျ ပထမဦးစားပေးကို တဈခုရှေးပါ။ ကိုယျဦးစားပေးရှေးတဲ့ ပထမအခကျြပျေါမူတညျပွီးဈေးနှုနျးကတော့ ကှာခွားပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျလိုခငျြတဲ့အခကျြကိုရဖို့အတှကျ ထိုကျသငျ့တဲ့တနျဖိုးတော့ ပေးလိုကျပါ။
အခုဖျောပွထားတဲ့ အခကျြအလကျတှအေတိုငျး စဉျးစားပွီးဝယျရငျတော့ Akhayar-Tech ရဲ့ Fans တှအေတှကျ အကောငျးဆုံးမဟုတျရငျတောငျ အဆငျအပွဆေုံးသုံးလို့ရမယျ့ စမတျဖုနျး တဈလုံးဝယျယူနိုငျမယျဆိုတာ ယုံကွညျပါတယျ။ ကဲ AT ရဲ့ Fans တှရေော ဖုနျးဝယျရငျ ဘယျလိုအခကျြတှကေ ဦးစားပေးရတဲ့အခကျြတှဖွေဈမယျလို့ထငျသလဲ။ ဆှေးနှေးခဲ့ပါဦး